DAAWO: RW Kheyre ma khilaaf ayuu ka dhex abuuray Ahlu Sunadii isku duubneyd?
MUQDISHO(P-TIMES)- Saacadihii u dambeeyey ee xalay waxaa soo baxaya xogaha sheegaya in Raysalwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre uu si gaar ah kulan ula yeeshay Madaxa Xukuumada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir oo ahaa qofkii ay wada hadalo gaarka ah yeesheen, markii uu soo gaaray magaalada Dhuusa-Mareeb.
Kulanka gaarka ah oo laga heynin faahfaahin buuxda, haddana xogaha soo gaaray Puntlandtimes oo ay heshay ayaa sheegaya in Mr, Shaakir lagu qanciyey in meelmar laga dhigo wixii lagu heshiiyey, lagana war sugo natiijada ay ku dhawaaqi doonaan guddiga Abaabulka Shirka Galmudug ee caawa u hoyday Dhuusa-Mareeb.
Madaxweynaha & Raysalwasaaruhu waxay doonayaan in musharax ay doonayaan uu ku soo baxo jagada Madaxweyne-nimada Galmudug, Ahlu Suna iyo kooxo kale oo ku daabana ma doonayaan arrintaas.
Warar hoose ayaa sheegaya Shaakir uu hadda ciyaarayo howl adag oo siyaasadeed, laakiin wadata caqabadaheeda, gaar ahaana in ay kala jabaan Ahlu Suna oo horey ahayd cidda kaliya ee u mideysan kuna sugan gobalada dhexe ee dalka.
Meel adag ayay ka gaartay Ahlu Suna & Kheyre, waxayna u diideen in wax ciidamo ah uu kala soo dago garoomada Guriceel iyo Dhuusa-Mareeb, sidaas oo kale maanta amaro ayay ku soo rogeen.
Hogaamiyaha ruuxiga ah eel eh talada ugu dambeysa Ahlu Suna Macalin Maxamuud wuxuu u arkaa dabin siyaasadeed waxyaabaha la dhigay oo dhan, wuxuuna si gaar ah u doonayaa in la fuliyo damacooda siyaasadeed.
Raysalwasaare Kheyre ayaa shalay galabnimadii 30 July 2019, booqday xerada ciidamada ee AHlu Suna ku jiraan si loo eego tiradda ciidamada kooxdu u doonayso in ay darajooyinkooda ciidan ku noqdaan kuwa dawladda Soomaaliya ay ku mushaarsiiso.